Global Voices teny Malagasy » Ejypta: Navoaka Ny Fonja ilay Mpamaha Bolongana Maintimolaly Alaa Abdel Fattah · Global Voices teny Malagasy » Print
Ejypta: Navoaka Ny Fonja ilay Mpamaha Bolongana Maintimolaly Alaa Abdel Fattah
Voadika ny 03 Janoary 2012 9:30 GMT 1	 · Mpanoratra Rasha Abdulla Nandika (fr) i Samy Boutayeb, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Ejipta, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, GV Mpisolovava
(Lahatsoratra navoaka voalohany tamin'ny 27/12/2011)
Araka ny didy navoakan'ny Fitsarana Ady Heloka Bevava, noafahana ihany ilay mpamaha bolongana malaza Alaa bdel Fattah taorian'ny fitazonana azy vonjimaika nandritra ny 56 andro.
Tafahoana tamin'ny fianakaviany sy ny zanany lahikely vao 20 andro izy, teraka io nandritra ny fotoana nitazonana azy tany am-ponja. Nomena anarana hoe Khaled ilay zazakely ho fahatsiarovana ilay martiora ejyptiana Khaled Said, novonoin'ireo polisy mpikaro-baovao tamin'ny fomba feno habibiana teo anoloan'ny Cybercafé tao Alexandrie, tamin'ny jiona 2010. Niaraka tamin'ny fianakavian'i Alaa tany amin'ny fitsarana ady heloka bevava ao Kairo ny mpanoratra ny lahatsoratra omaly vao maraimbe, natomboka ihany ny famotorana nony farany. Ni-tweet izy hoe:
Tao amin'ny fitsarana ady heloka bevava ao Kairo, niaraka tamin'ny fianakavian'i Alaa. Tao anatin'ny efitrano i Alaa. Miandry ny famotorana izahay. Antenaina fa hisosa tsara avokoa ny fandehan-javatra rehetra.
Nosamborin'ny Fitsarana ady miaramila i Alaa noho ny fandavany hamaly ny fanontaniana napetraka taminy, nampiasa ny zony hangina izy ho fanehoany ny tsy maha ara-dalana ny fitsarana ady miaramila atao amin'ny olom-pirenena. Fantany tsara fa tsy maintsy ho voasazy izy noho izany fanapaha-keviny izany, araka ny tohin'ny tantara hitantsika. Nafindra tamin'ny fitsarana ady madio ihany anefa ny raharaha mahakasika an'i Alaa. Natomboky ny mpitsara omaly ny fizotry ny famotorana, fotoana vitsy avy eo, noafahana i Alaa, foana ny fitazonana azy vonjimaika .
Vao avy noafahana i Alaa Abdel fattah. Hafaliana lehibe! Tsy haiko intsony ny manambara ny hafaliana ato anatiko
Tsy maintsy niverina any am-ponja ao Torah i Alaa, toerana nitazonana azy, ho fampiharana ny didy famoahana azy. Narahinay hatrany Torah izy, minitra vitsy taty aoriana anefa nolazaina taminay fa efa nafindra tao amin'ny Fonjaben'i Kairo izy, ary nandeha avy hatrany tany amin'izany toerana izany izahay.
Eto amin'ny Fonjaben'i Kairo izahay miandry raha eto no havoaka i Alaa na any amin'ny komisaria. Manantena hody miaraka aminy izahay avy eo.
Niandry teo amin'ny adiny telo teo izahay tao amin'ny Fonjaben'i Kairo. Ka ni-tweet toy izao i Rasha tamin'ny farany:
علاء علي الاسفلت yfrog.com/kke5tjej  afaka i Alaa
Noafahana ihany i Alaa. Fotoana efa nandrasana tao anatin'ny 56 andro. Marobe ireo haino aman-jery tonga niandry azy, ary avy hatrany dia nandefa hafatra mamaivay ho an'ny fitondrana miaramila ny tenany. Nilaza tamin'ny haino aman-jery i Alaa fa tsy feno tanteraka ny tena fandresena raha toa ka tsy hoentina eny amin'ny fitsarana ireo manam-pahefana nitifitra mpanao fihetsiketsehana, fitsarana tsy mitanila no takiana amin'izany. Nisy ny fihetsiketsehana madinika avy eo, hoy ireo olona “Miala ny fitondra-miaramila.”
Aiza no alehan'i Alaa voalohany, miaraka amin'ny fitafiany tany am-ponja, ho any amin'ny kianja Tahrir maminy:
احنا طالعين مع علاء علي التحرير ..hiaraka amin'i Alaa eny amin'ny kianja Tahrir
Notsenaina toy ny olo-malaza i Alaa tao amin'ny kianja Tahrir. Nihazakazaka ny olona nitsena azy, mba hiarahaba azy sy hanoroka azy. Tonga tao amin'ny kianja Tahrir avokoa ireo namana rehetra izay nahita tao amin'ny Twitter fa afaka izy . Nanao kabary mahaliana sy tsy nampoizina i Alaa mikasika ny antony sy ny dikan'ny revolisiona sy izay zavatra mety hitranga any aoriana.
علاء من الزنزانة إلي التحرير Teo am-pivoahana ny fonja, nankeny amin'ny kianja Tahrir avy eo yfrog.com/kljmqelj 
Na dia teo aza ny fanambarana nataony tamin'ireo olona nanaraka azy fa mpitolona tsotra ho amin'ny revolisiona fotsiny izy ary mila manana fotoana ho azy manokana sy iarahany amin'ny fianakaviany sy ny zanany lahikely vao teraka, araka ny nambaran'ny mpanoratra, tsaroako avy eo ny antony maha zava-dehibe ny revolisiona sy ny antony mahatonga azy ho atahoran'ny Filan-kevitry ny miaramila. Manana toetrana mpitarika i Alaa, manana herimpanahy tahaka izany izy, manaja ny tenany izy ary manana fanetre-tena ka nahatonga azy ho ankafizin'ireo revolisionera. Faly ny olona miaraka aminy, mihaino azy, mandray izay lazainy. Ny fahaizany mandamin-javatra sy ny toetra ananany no mahatonga azy hitarika ireo olona mba hanao zavatra, hanatontosa tetikasa sarotra tanterahina, ary manatanteraka izany tsara. Na farafaharatsiny efa niezaka ary tsy manaiky kivy na diso fanantenana. Ny fanantenana no vahaolana eto. Izany no maha mpitarika ny mpitarika. Fakan-tahaka i Alaa. Faly tokoa izahay fa afaka ihany izy.
Isika (izaho, namana sasany sy ny fianakaviany) tonga hatraty amin'ny kianja Tahrir isika ary tonga hatrany amin'ny trano fonenan'ny ray aman-drenin'i Alaa, izay nahitany ny fianakaviany, ny vadiny, mpitolona ihany koa ny vadiny izay mpamaha bolongana ihany koa, Manal Hassan, izay nizaka ny tsy nahateo an'i Alaa nandritra ny herinandro farany nitondrany vohoka, sy ny zanany maminy indrindra Khaled.
Farany, ity ny tweet nahafinaritra ahy indrindra tamin'ny tweet rehetra.
@Alaa  sy ny zanany lahikely mahafatifaty Khaledyfrog.com/mnom4hj  @manal  @monasosh  #Alaaisfree 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/03/26982/